Soomaaliya Archives - Sawirrotv
Shirka Hogaamiyeyaasha Jaamacadda Carabta oo Maanta ka Furmaya Magaalada Camaan
March 29, 2017 – Waxaa maanta magaalada Camaan ee dalka Jordan ka furmaya shirka hogaamiyeyaasha Jaamacadda Carabta, kaasi oo ay isugu imaanayaan hogamiyeyaal badan oo ka socda Wadamada Jamacadda Carabta. Shirka qodobada looga hadlayo, waxaa ka mid ah Abaaraha ka jira Soomaaliya ,dhibaatooyinka ay la kulmayaan Falastiniyiinta, dagaalada ka socda Yemen. Madaxweynaha Soomaaliya mudane, Maxamed …
Madaxweynaha Kenya oo Casho Sharaf u Sameeyay Madaxweynaha Soomaaliya (SAWIRRO)
March 24, 2017 – Madaxweynaha dalka Kenya Mr, Uhuru Kenyatta ayaa xalay waxa uu casho sharaf u sameeyay Madaxweynaha Soomaaliya mudane, Maxamed C/laahi Farmaajo iyo marwadiisa. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa gelinkii dambe ee shalay si diiran loogu soo dhaweeyay xarunta madaxtooyada ee magaalada Nairobi. Madaxweyne Uhuru ayaa waxaa casho sharafta ku wehlinayay Ku xigeenkiisa, William Ruto …
Madaxweyneyaasha Dalalka Soomaaliya iyo kenya oo Maanta Kulan ku Qaatay Magaalada Nairobi (SAWIRRO)
March 23, 2017 – Kulan ay maanta yeesheen Madaxweyneyaasha dalalka Soomaaliya iyo kenya ayaa waxa ay ku kala saxiixdeen heshiisyo horudhac ah Madaxweynaha dalka Kenya Mr. Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in laba isbuuc gudahood dib loo billaabi doono duulimaadyada tooska ee Muqdisho iyo Nairobi, iyadoo meesha laga saari doono in lagu sii hakado garoonka ku …
March 18, 2017 – Nin kamid ahaa badmaaxiinta doonta waday oo ka badbaaday weerarkaasi ayaa sheegay in Doonida la weeraray ay ka buuxeen Qaxooti Soomaaliyeed oo u badnaa carruur iyo haween, kuwaasi oo ka cararayey dagaalka ka socda dalka Yemen, kuna sii jeeday Xeebaha dalka Suudaan. Badmaaxan oo lagu magacaabo Al-xasan Qaalib Maxamed, ayaa waxa …
Hay’ada IMF oo Sheegtay Inay Soomaaliya ka Cafinayso Daymaha Hadii ay Sharuudaha Lagu Xiray ka soo Baxdo (VIDEO)
February 21, 2017 – Hay’ada IMF oo sheegtey in deymo bixiyayaasha deymaha ku lahaa dalka Soomaaliya ay dhici karto inay cafiyaan qeyb ka mida deymahaasi oo gaaraya 5.3 Billion oo Dollar, hadii ay Soomaaliya buuxiso shuruudaha laga doonayo si looga cafiyo deymahaasi. Shuurdahaasi ayaa waxaa ka mid ah in Soomaaliya loo daabaco lacag cusub, islamarkaana …